10 sano oo ka soo wareegatay qaraxii Hotel Shaamow (WARBIXIN) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maanta oo kale 3-dii Bishi December ee sanadkii 2009 waxaa Hotelka Shaamow ee Magaalada muqdisho ka dhacay qarax la sheegay in uu ahaa ismiidaamin,kaas oo ay ku geeriyoodeen dad u badnaa mas’uuliyiin,xilli ay halkaasi ka socotay Munaasad ay ku qalin jebinayeen Arday baratay culuunta kala duwan ee lagu dhigo Jaamacadda Banaadir.
Qaraxaas ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 30 qof oo isugu jiray Wasiiro ka tirsanaa Dowladdii KMG aheyd ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Siyaasiyiin, Dhaqaatiir, Ardaydii qalin jebineysay qaarkood, Waalidiin iyo marti sharaf kale.
Dadka la xasuusto ee qaraxaasi ku geeriyooday ayaa waxaa kamid ahaa wasiirkii wasaaradda caafimaadka Qamar Aadan Cali, wasiirkii waxbarashada Maxamed C/llaahi Waayeel, wasiirkii hidaha iyo tacliinta sare prof Ibraahim Xasan Cadoow, wasiirkii wasaaradda dhalinyarada iyo Ciyaaraha Saleebaan Colaad Rooble.
Sidoo kale qaraxaasi waxaa ku geeriyooday Wariyeyaal ay kamid ahaayeen Maxamed Amiin Aadan Cabdulle oo u shaqeynayay idaacadda Shabeelle iyo Xasan Subeyr Xaaji Xasan oo isaguna ahaa sawirqaade ka tirsan telefishinka Al-Carabiya, iyadoo ay jireen suxufiyiin kale oo ku dhaawacmay.
Jawiga Goobta ay munaasabadda ka socotay ayaa ahaa ka hor qaraxa,hayeeshee, iyada oo ay socdaan khudbadaha mas’uuliyiinta uu qaraxa dhacay jawiga goobtana ay isbedeshay.
Shacabka Soomaaliyeed weli dhagahooda kama bixin qaraxaasi musiibada ahaa ee ka dhacay Gudaha Hotelka Shaamow, in kastoo wixii ka dambeeyey ay dhaceen qaraxyo kale oo dad badan ay ku dhinteen.
10 Sano kadib Amniga Magaalada Muqdisho ayaan aheyn mid weli la isku haleyn Karin,waxaana 14-kii Bishii Octoober ee sanadkii 2017 Isgoyska 14-ka Octoober Ex Soobe ka dhacay qarixii ugu weeynaa ee ka dhaca Soomaaliya,kaas oo ay ku geeriyoodeen in ka badan 500 oo Ruux halka 24-kii Bishii July ee sanadkaan 2019 uu ka dhex-dhacay Xarunta Gobolka Banaadir qarax ay ku geeriyoodeen guddoomiyihii Gobolkan Banaadir Eng, Cabdiraxmaan Yariisow iyo Guddoomiyeyaasha saddex kamid ah degmooyinka Gobolkan Banaadir.